कस्तो अचम्म ! ४ वर्षदेखि श्रीमान बिदेशमा श्रीमतिले जन्माइन जुम्ल्याहा छोराहरू(भिडियो सहित) – Dainik Samchar
August 22, 2021 295
श्रीमान धन कमाउन मलेशिया हुदा य,ता श्रीमतिले अर्कै पुरुषको जु,म्ली,या बच्चा जन्माएकी छिन । भोजपुरकी छेकी सेर्पाले उनका श्रीमान मलेशिया रहदा यता अर्कै पुरुष सँगको प्रेम र शारीरीक स’म्ब,न्ध,ले जु,म्ल्याहा बच्चा जन्माईकी हुन । आज भन्दा ४ बर्ष अगाडि छेकीको श्रीमान बिदेश कमाउन गएका थिए । घरमा छेकी ध,न अनि श्रीमानको जो’व’न कुरेर बसिरहेको रहिछिन ।
श्रीमानको प्रखाईमा ४ वर्ष बितेर ५ बर्ष बि,त्न लागेछ । तर श्रीमान घर फर्किएनन, अ,त्तो,प,त्तो नै भएन । त्यस पश्चात छेकीको मनले नया मो,ड लिएछ । उनी घर बाट निस्कीएर काठमान्डौ पुगीन । काठमान्डौको व्य,स्त सहरमा उनी पालिन निकै गा,रो थियो । उनी आफन्तीकोमा केहि दिन बसेछन । त्यसै क्रममा उनको डोलखा घर भएका कमल भुजेल सँग भे,ट भएछ । छेकी भन्दा कमल उमेरले ९ बर्ष सानो थिए । तर पनि उनीहरु बिचको माया यति सम्म ग,हि,राईमा पुगेछ ।
एक अर्कामा नछुटने भएछन , स,म्ब,न्ध निकै गा,ढा बनेछ । उनीहरुबाट जुम्ल्याहा बच्चा पनि जन्मेछन । एक छोरा अनि एक छोरी ,जु,म्ल्या,हा बच्चा जन्मेको केहि दिनमै नाम पनि कमले सार्वजनिक गरेका छन छोराको नाम जङगे छोरीको नाम चङखी यतिबेला उनी हरु निकै खुसी छन । छेकी भन्दछन पहिलेको श्रीमान जस्तो वा,स्ता नगरी एक्लो नबनावोस साथ दियोस । उता कमलले भन्दछन मैले कहिलै धो,का दिने छैन ।
पूरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Prevपाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुअघि देखिन्छन् यस्ता संकेत, कतै तपाईमा पनि छ की ?
Nextइन्डियन आइडल १२’ का विजेता पवनदीपले मुम्बईमा किने यति महङ्गो घर
होन्डाले सार्वजनिक गर्यो एड्भेन्चर मोडल सीबी २०० एक्स, कति पर्छ मूल्य ?
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4836)